Ampio ny Zanakao mba Hankatò | Ho An’​ny Fianakaviana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Tokony hovonoina ny finday aorian’ny amin’ny sivy alina, araka ny fitsipika ao an-trano, nefa indroa ny zanakao vavy, tamin’ity herinandro ity, no tratranao nandefa SMS taorian’ny misasakalina. Tsy maintsy mody alohan’ny amin’ny valo alina koa ny zanakao lahy nefa taorian’ny amin’ny sivy izy vao nody omaly.
Marina fa tsy mety ny nataon’ny zanakao. Fantaro anefa aloha hoe nahoana izy no tsy nankatò. Mety hampahery anao ny mahalala fa na dia hoatran’ny hoe manohitra anao aza izy, dia tsy voatery ho izany.
Tsy mazava tsara ny fitsipika. Misy tanora tsy mankatò satria tiany ho hita raha mitana ny teniny ny ray aman-dreniny, ka hanasazy azy tokoa raha mandika fitsipika izy. Tsy voatery ho lasa mpikomy anefa ny tanora toy izany. Alaim-panahy tsy hankatò ny ankizy rehefa miovaova ny ray aman-dreny eo amin’ny fampiharany sazy, na tsy mazava tsara ny fitsipika omeny.
Hentitra loatra. Misy ray aman-dreny te hifehy ny zanany ka manome fitsipika be dia be. Tezitra izy ireo raha vao tsy mankatò ilay zaza, ka ampiany indray ireo fitsipika. Vao mainka anefa izany miteraka olana matetika. Hoy ny boky Fivoaran’ny Fifandraisan’ny Ray Aman-dreny sy ny Zanaka (anglisy): “Arakaraka ny hiezahanao hifehy ny zanakao no hanoherany anao. Toy ny manosotra dibera amin’ny mofo izany, nefa mafy be ilay dibera. Hanapotika an’ilay mofo fotsiny izany, ary tsy vahaolana mihitsy ny manosotra mafy kokoa an’ilay dibera.”
Mahasoa ny fifehezana voalanjalanja tsara. Midika hoe mampianatra ny hoe “mifehy” fa tsy mitovy amin’ny hoe “manasazy”, izay midika hoe manao izay hahatsapana ho mijaly. Ahoana àry no hanampianao ny zanakao hankatò ny fitsipika omenao?
Ataovy mazava tsara ny fitsipika. Tokony ho fantatry ny tanora tsara hoe inona no tokony hataony ary inona no ho vokany raha tsy mankatò izy.—Toro lalan’ny Baiboly: Galatianina 6:7.
Soso-kevitra: Ataovy lisitra ny fitsipika ao an-trano. Eritrereto avy eo hoe: ‘Be loatra ve izy ireo? Sa vitsy loatra? Sao dia efa misy tsy ilaina intsony? Sa efa misy tokony hahitsy satria efa mahay mandray andraikitra kokoa ny zanako?’
Aza miovaova. Mety ho very hevitra ny ankizy raha fahadisoana mitovy ihany no nataony, nefa tsy nosazina izy tamin’ny herinandro lasa fa nosazina kosa tamin’ity herinandro ity.—Toro lalan’ny Baiboly: Matio 5:37.
Soso-kevitra: Ataovy mifanaraka amin’ilay fahadisoana ny sazy. Raha tsy manaja ny ora fodiana, ohatra, izy, dia mety ho azo aroso aloha kokoa ny ora fodiany.
Aza hentitra loatra. Tokony hilefitra ianao indraindray, ka hanome fahafahana ny zanakao rehefa mendrika an’izany izy.—Toro lalan’ny Baiboly: Filipianina 4:5.
Soso-kevitra: Iaraho midinika amin’ny zanakao ny fitsipika hapetraka. Mety ho izy mihitsy no asainao milaza ny sazy hampiharina aminy raha tsy mankatò izy. Mora kokoa amin’ny tanora ny mankatò fitsipika raha anisan’ny nametraka izany izy.
Ampio izy hanana toetra tsara. Tsy ny hankatoavan’ny zanakao fotsiny no tanjonao fa ny hanampy azy hahay hisaina koa, izany hoe hahay hanavaka ny tsara sy ny ratsy. (Jereo ilay efajoro hoe “Ampio Izy ho Tsara Toetra.”)—Toro lalan’ny Baiboly: 1 Petera 3:16.
Soso-kevitra: Mitadiava fanampiana ao amin’ny Baiboly. Ao no misy ny ‘fananarana’ tsara indrindra, “izay mahatonga ny olona ho lalin-tsaina.” Mahatonga ny ‘tanora fanahy ho malina’ koa ny fahendrena ao amin’izy io, sady manampy ny ‘zatovo hanana fahalalana sy fahaiza-misaina.’—Ohabolana 1:1-4.
AMPIO IZY HO TSARA TOETRA
Ampio ny zanakao hisaintsaina hoe inona no toetra tiany hampiavaka azy. Hahay handray fanapahan-kevitra tsara ny tanora rehefa tojo olana, raha misaintsaina an’ireto fanontaniana ireto:
Tiako ho olona hoatran’ny ahoana aho?—Kolosianina 3:10.
Inona no hataon’ny olona manana toetra toy ny an’i Kristy rehefa tojo olana hoatr’ity?—Ohabolana 10:1.
Misy tantarana lehilahy sy vehivavy maro ao amin’ny Baiboly. Hita tamin’izay nataon’izy ireny raha olona tsara izy na ratsy. (1 Korintianina 10:11; Jakoba 5:10, 11) Ampiasao ireny tantara ireny mba hanampiana ny zanakao ho tsara toetra.
Ahoana no azonao anampiana ny zanakao hanao safidy tsara, fa tsy hoe matahotra ny ho bedy fotsiny?
Efa mihalehibe ve ny zanakao? Ahoana àry no hanampianao azy ho lasa olon-dehibe matotra?
Hizara Hizara Ampio ny Zanakao mba Hankatò
Ahoana Raha Lasa Tsy Atokisanao Intsony ny Zanakao?